Hagaha qeexan ee ugu fiican iOS 13 tabaha - Qeybta II | Wararka IPhone
Hage qeexan oo leh habka ugu wanaagsan ee iOS 13 - Qeybta II
Waxaan sii wadeynaa gudbinta hagitaanada saxda ah sidaa darteed waxaad ula tacaali kartaa macruufka 13 sida khabiir run ah meel kasta oo aad tagtid, dabcan sida ugu badan uga faa’iideyso iPhone-kaaga inuu u qalmo. Daahfurka macruufka 13 waxaa loo qorsheeyay qeybtii labaad ee bisha Sebtember waana waqti fiican oo loogu diyaargaroobayo dhammaan astaamahan cusub ee imanaya.
In kasta oo warka u muuqan karo wax yar sababtoo ah dib u qaabeynta yar ee nidaamka qalliinka, xaqiiqadu waxay tahay in iOS 13 ku dhex dhuumanayo cabir war ah oo ay tahay inaad ogaato. Sidaas darteed, Nala soo baro waxa jira xeeladaha ugu fiican ee lagu maareeyo macruufka 13 sida khabiir oo ku tuuji ilbiriqsi kasta iPhone-kaaga.
Waxa ugu horreeya ayaa ah inaan ku xusuusiyo in hagahan saxda ah lagu sii daayay qaybo dhawr ah, Waxaan kuu deyneynaa hagaha koowaad ee LINKAN sidaa darteed waxaad sidoo kale arki kartaa waa maxay tabaha aan waqtigaas haysanno oo markaa ha moogaan gebi ahaanba midna. Runtii waan hubaa inaad rabto inaad ogaato mid kasta oo ka mid ah.
1 Sida loo hagaajiyo muddada taabashada ee 3D Touch ama Haptic Touch
2 Sida loo soo rogo feylasha Safari
3 Sida loo rogo looguna saxo fiidiyowyada
4 Sida loo xusho sawir iyo magac loogu talagalay Farriimaha
Sida loo hagaajiyo muddada taabashada ee 3D Touch ama Haptic Touch
Sidaan ku sheegnay qaybo kale oo hagaha ah, 3D Touch iyo Haptic taabashada waxay umuuqdaan kuwo lagu xukumay inay kuwada noolaadaan wada noolaansho, Taabashada Haptic waa bedel wanaagsan oo loogu talagalay kuwa aan haysan aalado la shaqeeya qalabka ka dhigaya 3D Touch suurtagal, si kastaba ha ahaatee, xaqiiqadu waxay tahay markii aad tijaabisay 3D Touch waxaad ogaaneysaa in kastoo Haptic Touch uu shaqada qabto, maahan sida saxda ah oo dareen leh sida 3D Touch. Ahaw sida ay doontaba ha noqotee, Apple waxay rabtaa in labada nidaamba ay kuwada noolaadaan wada noolaansho, sababtaas awgeed waxay ku darsatay hagaajinno noo sahlaya khibradeena.
Hawlaha ugu horreeya waa in la hagaajiyo waqtiga muddada taabashada ee lagama maarmaanka u ah howlaha Haptic Touch iyo menusyada fikradda ah ee la hawlgelinayo, haddii aan cadaadis dheeraad ah saareyno (3D Touch) iyo haddii kale. Si tan loo sameeyo, waxaan si fudud u aadi doonnaa Settings> Helitaanka> 3D taabashada iyo jawaab celinta haptic> Muddada taabashada waxaan awoodi doonnaa inaan kala dooranno "gaaban" iyo "dheer" si aan ugu hagaajinno sida aan jecel nahay.
Sida loo soo rogo feylasha Safari
Safari waa mid ka mid ah barnaamijyada sida weyn uga faa'iideystay cusboonaysiintaan iOS 13, Tusaale ahaan Safari ilaa hada ma lahan maamule soo dejin, taasi waa, gebi ahaanba kama soo dejisan karno Safari ilaa aan adeegsanayno "Share ..." menu codsi kasta oo kale, laakiin xaqiiqdii kuma jirto xusuusta keydkeena. iPhone. Waxaan lahadleynaa waagii hore maxaa yeelay hadii iOS 13 ay leedahay xiddig shaqo, xaqiiqdii waa tan.
Hadda Safari waxay noo oggolaan doontaa inaan kala soo baxno nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha ka baxsan dibadda si toos ah keydka iphone-keena iyadoo la adeegsanayo faylka baaraha ku dhex jira macruufka 13. waxaan rabnaa Safari waxayna ka kooban yihiin waxyaabo la soo dejisan karo, markaa hawl cusub oo soo degsasho ah ayaa soo muuqan doonta. Haddii aysan weli muuqan, waxaan si fudud u gujineynaa iskuxiraha iyo qaabka macnaha guud waxaan dooranay "Keydso Faylasha".
Sida loo rogo looguna saxo fiidiyowyada
Hadda Apple wuxuu si weyn u hagaajiyay tifaftiraha sawirka, Si kastaba ha noqotee, asal ahaan waxa ay qabatay ayaa ku daraya dagaal wanaagsan oo shaqeynaya tifaftiraha horay u jiray oo aan u isticmaali karno hab gebi ahaanba dareen leh. Waxa aan sidaa u caadiga ahayn waxay ahayd awoodda tooska looga duubi karo fiidiyowyada ka soo baxa macruufka 'iOS' iyo hadda imaatinka macruufka 13 waa macquul. Waxaan awoodi doonnaa inaan sameyno ficillo badan si aan u hagaajino fiidiyowyada, oo ay ku jiraan wareejinta fiidiyowga.
Waxay umuuqataa wax aan waxba kajirin, laakiin wareejinta fiidiyowga iyo tafatirka waxay ahayd wax aan macquul ka aheyn macruufka gallery Si aad isku shaandheyn iyo edit video ah si fudud Waa inaan tagnaa arjiga iOS Photos, waxaan doorannaa fiidiyowga su'aasha laga qabo iyo dhinaca midigta sare waxaan ka helaynaa badhanka "Tafatir" Markii aan riixno, liiska shaqooyinka ayaa hoos ka furmaya, kuwaas oo ay ka mid yihiin goobaha kala duwan, miirayaasha, iyo dabcan badhanka si uu u wareejiyo fiidiyowga una jiheeyo hadba sida dhadhankeenna iyo baahiyaheenna, Apple ma awoodin inuu u fududeeyo anaga
Sida loo xusho sawir iyo magac loogu talagalay Farriimaha
Farriimaha ayaa ah kuwa weligood ah ee la ilaaway macruufka, mana aha si sax ah sababta oo ah Apple dadaal badan ma saarto sameynta arjiga, si kastaba ha noqotee meel ka baxsan Mareykanka iyo Boqortooyada Midowday isticmaalkeedu waa wax la taaban karo, taasna waxaa ugu wacan waddamadan Diritaanka SMS wuxuu ahaa mid bilaash ah in mudo ah, halka inta soo hartay aan adeegsanay nidaamyo kuxiran internetka sida midka ay bixiyaan WhatsApp ama FB Messenger. Noqo sida ay noqon karto, Farriimaha waa codsi waxtar leh oo dhammaystiran oo ku soo kordha cusbooneysiin kasta oo iOS ah.
Marka laga hadlayo imaatinka iOS 13, Apple waxay rabtay inay farriimaha siiso shakhsiyad yar oo dheeraad ah oo ay uga dhigto mid u eg sida ay tahay, codsi fariin deg deg ah. Si tan loo sameeyo, haddaba farriimaha ayaa noo oggolaanaya inaan qaabeyno sawir iyo magac isticmaale oo aan la wadaagno xiriiradayada. Si tan loo sameeyo waxaan galnaa farriimaha, dhagsii badhanka (…) ee geeska midig ee kore dooro ikhtiyaarka «Wax ka beddel magaca iyo sawirka ...». Halkani waa halka aan ka dooran karno kaas oo ah sawirkeena shakhsi ahaaneed iyo magacaaga farriimaha, sida aan ku sameyn lahayn tusaale ahaan WhatsApp. Goor dambe qaybta Dejinta haddii aan dooranno Farriimaha waxaan awood u yeelan doonnaa inaan kala dooranno kuwa aan la wadaagno sawirkeenna muuqaal ... maxaa xigi doona, Sheekooyinka Apple?
Waxaan rajeyneynaa in qeybtaan labaad ee hagaha saxda ah tabaha loo adeegsado khubarada isticmaasha macruufka ee iOS 13 ayaa kaa caawisay, tan waxaan dooneynaa inaad si qoto dheer u ogaato sida iPhone-gaagu u shaqeeyo sidaasna waxaad ku heli kartaa inta ugu badan qalab astaamahan leh Haddii aad wax shaki ah qabtid, waxaad ogtahay khiyaanooyin badan ama waxaad wax uun ka leedahay, xusuusnow inaad isticmaasho sanduuqa faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Hage qeexan oo leh habka ugu wanaagsan ee iOS 13 - Qeybta II